Ntuziaka kacha mma maka ndị nbipute 3D | ngwaike efu
Ntuziaka kacha mma maka ndị nbipute 3D
Isaac | | Emelitere na 25/02/2022 13:33 | Nkọwa 3D
N'ichepụta ihe mgbakwunye nwere ọtụtụ akụkụ nke ngwa, ma na mpaghara ntụrụndụ ma na ụlọ ọrụ na teknụzụ. Ndị na-ebi akwụkwọ 3D abịawo gbanwee ka ị na-ebipụta na ha na-ewu ụlọ ọhụrụ, nke nwere ike ịmalite site na obere ihe na anụ ahụ dị ndụ na ọbụna ụlọ, ma ọ bụ akụkụ aerodynamic maka motorsport.
Ruo afọ ole na ole gara aga, mbipụta 2D bụ ihe nke akụkọ ifo sayensị. Ọtụtụ rọrọ nrọ inwe ike ibipụta ihe kama ibipụta ihe onyonyo ma ọ bụ ederede na mpempe XNUMXD dị mfe. Ugbu a teknụzụ tozuru oke na enwere teknụzụ na-enweghị atụ, ụdị, ụdị, wdg. N'ime ntuziaka a, ị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe gbasara ndị na-ebi akwụkwọ pụrụ iche.
1 Kedu ihe bụ voxel?
2 Kedu ihe bụ ngwa nbipute 3D
2.0.1 Akụkọ nke mbipụta 3D
2.1 Kedu ihe mgbakwunye mmepụta ma ọ bụ AM
2.2 Kedu ihe bụ bioprinting
2.3 Ka ndị nbipute 3D si arụ ọrụ
3 Nhazi 3D na mbipụta 3D
3.1 Ngwa nbipute 3D
3.1.2 Njedebe Cura
3.1.4 onye na-eche echiche
3.1.8 Njikọ Autodesk Fusion 360
3.1.10 ntupu lab
3.2 Nkọwa 3D
4.0.1 Otu esi emeghe STL
4.0.2 Ụdị 3D
4.0.3 Site na ezigbo ihe nlereanya (nyocha 3D)
5 Ngwa na ojiji nke ngwa nbipute 3D
5.1 ụdị injinia
5.2 ije na ewu
5.3 Nhazi na nhazi nke ọla na ngwa ndị ọzọ
5.4 Ntụrụndụ: ihe ejiri ngwa nbipute 3D mee
5.5 Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
5.6 Ndị na-ebi akwụkwọ 3D na ọgwụ: dentistry, prosthetics, bioprinting
5.7 Nri/nri ebipụtara
6 Ozi ndị ọzọ
Kedu ihe bụ voxel?
Ọ bụrụ na ị mabeghị nke ọma ụda olu, ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe ọ bụ, ebe ọ bụ na mbipụta 3D dị mkpa. Ọ bụ abbreviation nke English «volumetric pixel», a cubic unit na-eme ka elu a atọ akụkụ ihe.
E nwekwara akụkụ ndị ọzọ dị ka teksel (texture element or texture pixel), nke bụ nkeji kacha nta nke ederede etinyere n'elu elu na eserese kọmputa, ma ọ bụ tixel (pikselụ tactile), nke bụ neologism nke na-ezo aka n'ụdị. nke teknụzụ haptic maka ihuenyo mmetụ aka, na-enye ohere ịme ka ịmetụ aka nke textures dị iche iche.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-abụ 2D nhata nke pikselụ. Ma, dị ka ị na-ahụ na foto dị n'elu, ọ bụrụ na ekewa ụdị 3D ahụ n'ime cubes, nke ọ bụla n'ime ha ga-abụ voxel. Ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe ọ bụ, ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị elu na-ekwe ka njikwa nke voxel ọ bụla n'oge a na-ebipụta akwụkwọ iji nweta nsonaazụ ka mma.
Kedu ihe bụ ngwa nbipute 3D
Ihe nbibi 3D bụ igwe nwere ike ibipụta ihe nwere olu sitere na kọmpụta. Nke ahụ bụ, dị ka ngwa nbipute a na-ahụkarị, mana kama ibipụta n'elu ala dị larịị na na 2D, ọ na-eme ya nwere akụkụ atọ (obosara, ogologo na ịdị elu)). Atụmatụ site na nke a ga-esi nweta nsonaazụ ndị a nwere ike ịpụta site na ụdị 3D ma ọ bụ CAD, na ọbụna site na ihe anụ ahụ nke dị adị. Nyocha XNUMXD.
Ha nwekwara ike bipụta ụdị ihe niile, site na ihe ndị dị mfe dị ka otu iko kọfị, ruo ọtụtụ mgbagwoju anya dị ka anụ ahụ dị ndụ, ụlọ, wdg. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nrọ nke ọtụtụ ndị chọrọ ka eserese ha ebipụtara na-adị ndụ site na mpempe akwụkwọ dị ebe a, ha dịkwa ọnụ ala iji mee ihe karịrị ụlọ ọrụ, nakwa n'ụlọ.
Akụkọ nke mbipụta 3D
Akụkọ ihe mere eme nke mbipụta 3D yiri ka ọ na-adịbeghị anya, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-alaghachi azụ afọ ole na ole. Ihe niile sitere na Ngwa inkjet sitere na 1976, site na nke a na-enwe ọganihu iji dochie ink obibi akwụkwọ na ihe iji mepụta ihe na olu, na-eme ihe dị mkpa na akara akara na mmepe nke nkà na ụzụ a ruo na igwe ugbu a:
N'afọ 1981, e nwetara ikike obibi akwụkwọ mbụ 3D. o mere ya Dr Hideo Kodama, nke Nagoya Municipal Industrial Research Institute (Japan). Echiche bụ iji ụzọ abụọ dị iche iche ọ chepụtara maka imepụta ihe mgbakwunye site na iji resin nwere mmetụta foto, dị ka esi eme ibe. Agbanyeghị, a ga-ahapụ ọrụ ya n'ihi enweghị mmasị na ego.
N'ime otu afọ iri a, ndị injinia French Alain Le Méhauté, Olivier de Wittte na Jean-Claude André, malitere inyocha nkà na ụzụ nke n'ichepụta site solidification nke photosensitive resins na UV curing. Ndị CNRS agaghị anabata ọrụ a n'ihi enweghị mpaghara ngwa. Na, n'agbanyeghị na ha tinyere akwụkwọ maka patent na 1984, a ga-emecha gbahapụ ya.
Charles hullNa 1984, ọ ga-ejikọta ụlọ ọrụ 3D Systems, na-emepụta stereolithography (SLA). Ọ bụ usoro a ga-esi na-ebipụta ihe 3D site na ụdị dijitalụ.
La mbụ SLA ụdị 3D igwe A malitere ire ya n'afọ 1992, ma ọnụ ahịa ya dị nnọọ elu ma bụrụkwa ngwá ọrụ ndị bụ́ isi.
Na 1999 ọzọ nnukwu ihe ịrịba ama, nke oge a na-ezo aka bioprinting, inwe ike ịmepụta akụkụ ahụ mmadụ n'ime ụlọ nyocha, karịsịa eriri afo na-eji ihe mkpuchi sịntetik na sel stem ahụ n'onwe ha. Nke a dị ịrịba ama sitere na Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, na-emepe ụzọ maka imepụta akụkụ ahụ maka ntụgharị.
El Akụrụ ebipụta 3D ga-abata na 2002. Ọ bụ ihe nlereanya na-arụ ọrụ nke ọma nwere ikike nzacha ọbara na imepụta mmamịrị n'ime anụmanụ. Emebere mmepe a n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ.
Adrian Bowyer chọtara RepRap na Mahadum Bath na 2005. Ọ bụ ụzọ mepere emepe iji wuo ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị ọnụ ala bụ ndị na-emegharị onwe ha, ya bụ, ha nwere ike ibipụta akụkụ nke ha na iji ihe oriri dị ka. 3D filaments.
Otu afọ mgbe e mesịrị, na 2006, teknụzụ SLS bịarutere na ohere nke ịmepụta ọtụtụ ekele maka laser. Na ya, a na-emeghe ọnụ ụzọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
2008 ga-abụ afọ nke mbụ ngwa nbipute na ikike imegharị onwe ya. Ọ bụ Darwin nke RepRap. N'otu afọ a, ọrụ mmekọ malitekwara, webụsaịtị ebe ndị obodo nwere ike kekọrịta atụmatụ 3D ha ka ndị ọzọ wee bipụta ya na ngwa nbipute 3D nke ha.
Enwekwara ọganihu dị ịrịba ama na ikike prosthetics 3D. 2008 ga-abụ afọ onye mbụ ga-enwe ike ịga ije ekele maka ụkwụ prosthetic ebipụtara.
2009 bụ afọ nke Makerbot na ngwa nke ngwa nbipute 3D, ka ọtụtụ ndị ọrụ nwee ike zụta ha ọnụ ala wee wuo ngwa nbipute nke ha n'onwe ha. Ya bụ, gbakwasara ndị na-emepụta ihe na DIY. N'otu afọ ahụ, Dr. Gabor Forgacs na-eme nnukwu nzọụkwụ ọzọ na bioprinting, na-enwe ike ịmepụta arịa ọbara.
El mbụ e biri ebi ụgbọ elu na 3D ga-abata na 2011, nke ndị injinia sitere na Mahadum Southampton kere. Ọ bụ atụmatụ enweghị mmadụ, mana enwere ike rụpụta ya n'ime naanị ụbọchị 7 yana mmefu ego nke € 7000. Nke a meghere mmachibido iwu maka imepụta ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ. N'ezie, n'otu afọ a ụgbọ ala mbụ e biri ebi ga-abịarute, Urbee site Kor Ecologic, na ọnụ ahịa n'etiti € 12.000 na € 60.000.
N'otu oge ahụ, mbipụta malitere iji ihe ndị mara mma dịka ọla ọcha mara mma na ọla edo 14kt, si otú a na-emepe ahịa ọhụrụ maka ndị na-ere ahịa jewelers, na-enwe ike ịmepụta ọnụ ala dị ọnụ ala site na iji ihe ziri ezi.
Na 2012 ọ ga-abata mbụ prosthetic agba ịkụnye Ebipụtara 3D ekele maka otu ndị nyocha Belgian na Dutch.
Na ugbu a ahịa anaghị akwụsị ịchọta ngwa ọhụrụ, melite arụmọrụ ha, na ịga n'ihu na-agbasawanye site na azụmahịa na ụlọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eche ole ka ihe nbipute 3d na-eri, nwere ike si na ihe karịrị € 100 ma ọ bụ € 200 n'ihe banyere nke dị ọnụ ala na nke kacha nta, ruo € 1000 ma ọ bụ karịa na nke kachasị elu na nke ka ukwuu, na ọbụna ụfọdụ na-efu ọtụtụ puku euro maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Kedu ihe mgbakwunye mmepụta ma ọ bụ AM
Mbipụta 3D abụghị ihe ọzọ karịa ihe mgbakwunye mmepụta ihe, ya bụ, usoro mmepụta nke, iji mepụta ụdị 3D, na-ekpuchi ihe dị iche iche. N'ụzọ dị nnọọ iche nke mmepụta mmepụta ihe, nke dabeere na ngọngọ mbụ (ibé akwụkwọ, ingot, ngọngọ, mmanya, ...) nke a na-eji nwayọọ nwayọọ wepụ ihe onwunwe ruo mgbe e nwetara ngwaahịa ikpeazụ. Dịka ọmụmaatụ, dị ka mmepụta ihe na-ebelata, ị nwere mpempe akwụkwọ a pịrị apị na lathe, nke na-amalite na ngọngọ osisi.
N'ihi nke a usoro mgbanwe ị nwere ike nweta mmepụta ihe dị ọnụ ala n'ụlọ, ụdị maka ndị injinia na ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, nweta prototypes maka ule, wdg. Tụkwasị na nke a, mmepụta ihe mgbakwunye a emeela ka o kwe omume ịmepụta akụkụ ndị na-agaghị ekwe omume na mbụ site na ụzọ ndị ọzọ dị ka ebu, extrusion, wdg.
Kedu ihe bụ bioprinting
Bioprinting bụ ụdị pụrụ iche nke nrụpụta mgbakwunye, mekwara ya na ngwa nbipute 3D, mana nsonaazụ ya dị nnọọ iche na ngwa inert. Mee mee ka anụ ahụ dị ndụ na akụkụ ahụ, site na akpụkpọ ahụ mmadụ gaa na akụkụ ahụ dị mkpa. Ha nwekwara ike rụpụta ihe ndị nwere ike ime ihe, dị ka nke maka prostheses ma ọ bụ ihe etinyere.
Enwere ike nweta nke a site na ụzọ abụọ:
A na-ewu ihe owuwu, ụdị nkwado ma ọ bụ scaffold nke ihe mejupụtara polymers dakọtara na a dịghị ajụ ha n’ahụ́, nakwa na mkpụrụ ndụ ga-anabata ha. A na-ewebata ihe owuwu ndị a n'ime bioreactor ka mkpụrụ ndụ wee nwee ike ibi n'ime ha ma tinye ha n'ime ahụ, ha ga-eji nwayọọ nwayọọ mee ohere maka mkpụrụ ndụ nke ihe ndị na-ahụ maka ya.
Ọ bụ echiche nke akụkụ ahụ ma ọ bụ anụ ahụ oyi akwa site na oyi akwa, mana kama iji ihe dịka plastik, ma ọ bụ ndị ọzọ. omenala cell ndụ na usoro ntinye nke a na-akpọ biopaper (ihe nwere ike imebi ihe) iji kpụzie.
Ka ndị nbipute 3D si arụ ọrụ
El ka ngwa nbipute 3d si arụ ọrụ Ọ dị nnọọ mfe karịa ka ọ nwere ike iyi:
Ị nwere ike ịmalite site na ọkọ na-eji software gaa na Ihe ngosi 3d ma ọ bụ CAD imewe ka ịmepụta ụdị nke ịchọrọ, ma ọ bụ budata faịlụ emeberela, na ọbụna jiri nyocha 3D nweta ụdị 3D site na ihe anụ ahụ n'ezie.
Ugbu a ị nwere Ụdị 3D echekwara na faịlụ dijitalụ, ya bụ, site na ozi dijitalụ nwere akụkụ na ọdịdị nke ihe ahụ.
Ihe ndia bu slicing, Usoro nke a na-ebipụ ụdị 3D n'ime narị otu narị ma ọ bụ ọtụtụ puku akwa ma ọ bụ mpekere. Ya bụ, ka esi ebibie ihe nlereanya site na ngwanrọ.
Mgbe onye ọrụ pịrị na bọtịnụ mbipụta, ngwa nbipute 3D ejikọrọ na PC site na eriri USB, ma ọ bụ netwọkụ, ma ọ bụ faịlụ etinyere na kaadị SD ma ọ bụ mbanye pen, ga-adị. atụgharịrị site na ngwa nbipute processor.
Site n'ebe ahụ, ngwa nbipute ga-aga na-achịkwa moto ịkwaga isi wee si otú ahụ mepụta oyi akwa site na oyi akwa ruo mgbe a ga-enweta ihe nlereanya ikpeazụ. Yiri ngwa nbipute a na-emekarị, mana olu ga-eto oyi akwa site na oyi akwa.
Otu esi emepụta akwa akwa ndị ahụ nwere ike ịdị iche site na teknụzụ nke nwere ihe nbipute 3D. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịbụ site na extrusion ma ọ bụ site na resin.
Nhazi 3D na mbipụta 3D
Ozugbo ịmara ihe ngwa nbipute 3D bụ yana otu o si arụ ọrụ, ihe na-esote bụ mara ngwanro ma ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa maka mbipụta. Ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ isi na eserese ma ọ bụ echiche gaa na ihe 3D n'ezie.
Ị kwesịrị ịma na e nwere ọtụtụ ụdị ngwanrọ maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D:
N'otu aka ahụ enwere mmemme nke 3D modeling ma ọ bụ 3D CAD imewe nke onye ọrụ nwere ike ịmepụta atụmatụ site na ọkọ, ma ọ bụ gbanwee ha.
N'aka nke ọzọ e nwere ihe a na-akpọ slicer software, nke na-agbanwe ụdị 3D ka ọ bụrụ ntuziaka akọwapụtara nke a ga-ebipụta na ngwa nbipute 3D.
Enwekwara ndi ngwa ntupu mgbanwe. A na-eji mmemme ndị a, dị ka MeshLab, gbanwee nhịahụ nke ụdị 3D mgbe ha na-akpata nsogbu mgbe a na-ebipụta ha, ebe ọ bụ na mmemme ndị ọzọ nwere ike ghara iburu n'uche ka ndị na-ebi akwụkwọ 3D si arụ ọrụ.
Ngwa nbipute 3D
Nke a bụ ụfọdụ n'ime kacha mma 3d obibi software, ma akwụ ụgwọ ma n'efu, maka Ihe ngosi 3d y Nhazi CAD, yana software efu ma ọ bụ mepere emepe:
Google na Ngwanrọ ikpeazụ ekepụtara Sketchup, ọ bụ ezie na o mechara banye n'aka ụlọ ọrụ Trimble. Ọ bụ sọftụwia efu na nke efu (nwere ụdị atụmatụ ịkwụ ụgwọ dị iche iche) yana nwekwara ike ịhọrọ n'etiti iji ya na desktọpụ Windows ma ọ bụ na webụ (sistemụ arụmọrụ nwere ihe nchọgharị weebụ dakọtara).
Mmemme a nke graphic imewe na 3D modeling bụ otu n'ime ihe kacha mma. Site na ya ị nwere ike ịmepụta ụdị ụdị ọ bụla, ọ bụ ezie na a haziri ya nke ọma maka nhazi ụlọ, mmepụta ụlọ ọrụ, wdg.
Ultimaker emebela Cura, ngwa emebere nke ọma maka ndị nbipute 3D nke enwere ike gbanwee paramita mbipụta ma gbanwee ghọọ koodu G. David Raan kere ya mgbe ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a, ọ bụ ezie na ọ dị mfe nrụzi, ọ ga-emepe koodu ya n'okpuru ikikere LGPLv3. Ọ bụ isi mmalite mepere emepe ugbu a, na-eme ka ndakọrịta dị ukwuu na ngwanrọ CAD ndị ọzọ.
N'oge a, ọ na-ewu ewu na ọ bụ a nke kacha eji n'ụwa, nke nwere ihe karịrị nde mmadụ 1 sitere na ngalaba dị iche iche.
Ụlọ ọrụ Prusa chọkwara ịmepụta ngwanrọ nke ya. Ọ bụ ngwá ọrụ mepere emepe a na-akpọ PrusaSlicer. Ngwa a bara ụba nke ukwuu n'ihe gbasara ọrụ na njirimara, yana mmepe na-arụ ọrụ nke ọma.
Site na mmemme a, ị ga-enwe ike ibupu ụdị 3D gaa na faịlụ ala nke enwere ike ịmegharị ya mbụ Prusa na-ebi akwụkwọ.
Ihe omume ọzọ a bụ n'efu, enwere ike itinye ya na abụọ Microsoft Windows, macOS, na GNU/Linux. Emebere Ideamaker nke ọma maka ngwaahịa Raise3D, ọ bụkwa slicer ọzọ nke ị nwere ike iji jikwaa ụdịdị gị maka ibipụta n'ụzọ dị egwu.
FreeCAD chọrọ mmeghe ole na ole, ọ bụ ọrụ mepere emepe yana n'efu maka imewe 3D CAD. Na ya ị nwere ike ịmepụta ụdị ọ bụla, dịka ị ga-eme na Autodesk AutoCAD, ụdị akwụ ụgwọ na koodu nwe ụlọ.
Ọ dị mfe iji, yana interface nwere nghọta yana ọgaranya na ngwaọrụ iji rụọ ọrụ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe. Ọ dabere na OpenCASCDE Edere ya na C++ na Python, n'okpuru ikike GNU GPL.
Onye ọzọ mara ezigbo mma n'ụwa software efu. Nke a dị ukwuu software na-eji ọbụna ọtụtụ ndị ọkachamara, nyere ndị ike na nsonaazụ ọ na-enye. Dị na ọtụtụ nyiwe, dị ka Windows na Linux, na n'okpuru ikike GPL.
Ma ihe kacha mkpa banyere nke a software bụ na ọ bụghị naanị na-eje ozi ọkụ, nsụgharị, animation na okike nke eserese akụkụ atọ maka vidiyo animated, egwuregwu vidiyo, eserese, wdg, mana ị nwekwara ike iji ya mee ihe ngosi 3D wee mepụta ihe ịchọrọ ibipụta.
Ọ bụ ikpo okwu yiri FreeCAD, mana ọ bụ nke nwe ya na ngwanrọ akwụ ụgwọ. Ikikere gị nwere a ọnụ ahịa dị elu, ma ọ bụ otu n'ime mmemme a na-ejikarị eme ihe na ọkwa ọkachamara. Site na ngwanrọ a, ị ga-enwe ike ịmepụta ma 2D na 3D CAD aghụghọ, na-agbakwunye ngagharị, ọtụtụ textures na ihe, wdg.
Ọ dị maka Microsoft Windows, otu n'ime uru ya bụ ndakọrịta DWF faịlụ, nke bụ otu n'ime ụlọ ọrụ Autodesk n'onwe ya na-agbasa ma mepụta.
Njikọ Autodesk Fusion 360
Njikọ Autodesk Fusion 360 Ọ nwere ọtụtụ myirịta na AutoCAD, mana ọ dabere na ikpo okwu igwe ojii, yabụ ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ebe ọ bụla ịchọrọ ma nwee ụdị sọftụwia kachasị elu mgbe niile. N'okwu a, ị ga-akwụkwa ụgwọ ndenye aha, nke na-adịghịkwa ọnụ ala.
TinkerCAD bụ usoro ihe ngosi 3D ọzọ nke ahụ enwere ike iji ya mee ihe n'ịntanetị, site na ihe nchọgharị weebụ, nke na-emepe nke ọma ohere iji ya site na ebe ọ bụla ị chọrọ. Ebe ọ bụ na 2011 ọ na-enweta ndị ọrụ, wee ghọọ ikpo okwu na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D, na ọbụna na ebe mmụta, ebe ọ bụ na usoro mmụta ya dị mfe karịa nke Autodesk.
Ọ dị maka Linux, Windows na macOS, ọ bụkwa n'efu na ebe mepere emepe. MeshLab bụ usoro ngwanrọ nhazi ntupu 3D. Ebumnobi nke ngwanro a bụ ijikwa ihe owuwu ndị a maka idezi, ịrụzi, nleba anya, imepụta, wdg.
Ụlọ ọrụ Europe Dassault Systèmes, sitere na enyemaka ya SolidWorks Corp., ewepụtala otu n'ime ngwanrọ CAD kachasị mma na ọkachamara maka 2D na 3D modeling. SolidWorks nwere ike ịbụ ihe ọzọ na Autodesk AutoCAD, mana ọ bụ pụrụ iche e mere maka modeling n'ibu usoro. Ọ bụghị n'efu, ọ bụghịkwa oghere mepere emepe, ọ dịkwa maka Windows.
N'ikpeazụ, Creo bụ sọftụwia CAD/CAM/CAE kacha mma maka ngwa nbipute 3D ị nwere ike ịchọta. Ọ bụ sọftụwia mepụtara nke PTC na-enye gị ohere imepụta ọtụtụ ngwaahịa dị elu, ngwa ngwa na obere ọrụ. All ekele ya kensinammuo interface e mere iji melite usability na arụpụtaghị ihe. Ị nwere ike ịmepụta akụkụ maka mmepụta ihe mgbakwunye na mwepu, yana maka ịme anwansị, imepụta ihe, wdg. A na-akwụ ya ụgwọ, mechiri emechi yana naanị maka Windows.
Nzọụkwụ ọzọ iji chepụta site na iji software dị n'elu bụ mbipụta n'ezie. Nke ahụ bụ, mgbe site na faịlụ ahụ nwere ihe nlereanya 3D ngwa nbipute na-amalite n'ịwa n'ígwé ruo mgbe emecha ihe nlereanya ma nweta ezigbo nhazi.
Este usoro nwere ike were karịa ma ọ bụ obere, dabere na ọsọ mbipụta, mgbagwoju anya nke ibe ya na nha ya. Ma ọ nwere ike isi na nkeji ole na ole ruo awa. N'oge usoro a, enwere ike ịhapụ onye nbipute ahụ n'enweghị ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dị mma mgbe niile iji nyochaa ọrụ ahụ site n'oge ruo n'oge iji gbochie nsogbu site na njedebe na-emetụta nsonaazụ ikpeazụ.
N'ezie, ozugbo akụkụ ahụ mechara bipụta na ngwa nbipute 3D, ọrụ ahụ anaghị akwụsị ebe ahụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Mgbe ahụ ndị ọzọ na-abịakarị usoro ndị ọzọ a maara dị ka nhazi nhazi dị ka:
Wepụ akụkụ ụfọdụ nke kwesịrị ịmepụta na ndị na-abụghị akụkụ nke ihe nlereanya ikpeazụ, dị ka ntọala ma ọ bụ nkwado dị mkpa maka akụkụ ahụ guzoro.
Aja ma ọ bụ kpochasịa elu ahụ iji nweta ngwụcha ikpeazụ ka mma.
Ngwọta elu nke ihe ahụ, dị ka varnishing, eserese, baths, wdg.
Iberibe ụfọdụ, dị ka iberibe ígwè, nwere ike chọọ usoro ndị ọzọ dị ka ịsa achịcha.
Ọ bụrụ na a ga-ekewa otu mpempe n'ime akụkụ n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ihe dum n'ihi akụkụ ya, ọ nwere ike ịdị mkpa ijikọta akụkụ (mgbakọ, gluu, ịgbado ọkụ ...).
N'ikpeazụ, ngalaba na Ajụjụ ma ọ bụ ajụjụ na azịza a na-ajụkarị nke na-ebilite mgbe ị na-eji ngwa nbipute 3D. Ndị a na-achọkarị bụ:
Otu esi emeghe STL
Otu n'ime ajụjụ na-emekarị bụ kedu ka ị ga-esi mepee ma ọ bụ lelee faịlụ .stl. Mgbakwunye a na-ezo aka na faịlụ stereolithography ma nwee ike imeghe na ọbụna dezie ya Dassault Systèmes CATIA software n'etiti mmemme CAD ndị ọzọ dị ka AutoCAD wdg.
Na mgbakwunye na STL, e nwekwara faịlụ ndị ọzọ dị ka .obj, .dwg, .dxf, wdg. Ha niile na-ewu ewu na nke nwere ike meghere na ọtụtụ mmemme dị iche iche na ọbụna tọghata n'etiti usoro.
Ị kwesịrị ịma na ọ bụghị mgbe niile ka ị na-emepụta ihe osise 3D n'onwe gị, ị nwere ike nweta ụdị ihe dị njikere, site na ọnụ ọgụgụ sitere na egwuregwu vidio ma ọ bụ ihe nkiri, ihe eji eme ụlọ, ihe egwuregwu ụmụaka, prosthetics, masks, phone ikpe, wdg. Ntu Pi, na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ weebụsaịtị nwere ọba akwụkwọ ndị a ndebiri dị njikere ibudata na ibipụta na ngwa nbipute 3D gị. Ụfọdụ saịtị akwadoro bụ:
Ụlọ ihe nbipụta XYZ 3D
Atụmatụ nkuzi Dremel
Site na ezigbo ihe nlereanya (nyocha 3D)
Ihe ọzọ nwere ike ime, ọ bụrụ na ịchọrọ bụ ịmegharị clone zuru oke ma ọ bụ oyiri nke ihe 3D ọzọ, bụ iji a 3d nyocha. Ha bụ ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere iji nyochaa ọdịdị nke ihe, na-ebufe ihe nlereanya na faịlụ dijitalụ na ikwe ka mbipụta.
Ngwa na ojiji nke ngwa nbipute 3D
N'ikpeazụ, ndị na-ebi akwụkwọ 3D bụ enwere ike iji ọtụtụ ngwa. Ojiji kacha ewu ewu nwere ike inye bụ:
Otu n'ime ihe ndị kacha ewu ewu nke ndị nbipute 3D na ngalaba ọkachamara bụ maka imepụta ngwa ngwa, ya bụ, iji. ngwangwa prototyping. Ma ọ bụ iji nweta akụkụ maka ụgbọ ala ịgba ọsọ, dị ka Formula 1, ma ọ bụ ịmepụta ụdị nke injin ma ọ bụ usoro mgbagwoju anya.
N'ụzọ dị otú a, a na-ahapụ onye injinia ka ọ nweta akụkụ ngwa ngwa karịa ma ọ bụrụ na a ga-eziga ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana iji nweta ya. ule prototypes iji hụ ma ihe nlereanya ikpeazụ ga-arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya.
ije na ewu
N'ezie, na njikọ chiri anya n'elu, ha nwekwara ike iji wuo ihe owuwu ma mee nnwale igwe maka ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ma ọ bụ wuo ụfọdụ iberibe enweghị ike iji usoro ndị ọzọ rụpụta, mepụta ụdị ụlọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka ihe atụ ma ọ bụ ụdị, wdg.
Ọzọkwa, ntoputa nke ihe nbipute na ihe ndị ọzọ, emeghewokwa ụzọ iji nwee ike ibipụta ụlọ ngwa ngwa na nke ọma karị na nkwanye ùgwù na gburugburu ebe obibi. Ọbụna a tụrụ aro ka e were ụdị mbipụta a gaa na mbara ala ndị ọzọ maka ógbè ndị ga-abịa n'ọdịnihu.
Nhazi na nhazi nke ọla na ngwa ndị ọzọ
Otu n'ime ihe ndị kacha gbasaa bụ ọla e biri ebi. Ụzọ iji nweta iberibe pụrụ iche na ngwa ngwa, nwere njirimara ahaziri iche. Ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ 3D nwere ike ibipụta ụfọdụ amara na ngwa n'ihe ndị dị ka naịlọn ma ọ bụ plastik na agba dị iche iche, ma e nwekwara ndị ọzọ a na-eji n'ubi ọkachamara ọla nwere ike iji ọla ndị mara mma dị ka ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha.
N'ebe a, ị nwekwara ike ịgụnye ngwaahịa ụfọdụ a na-ebipụta n'oge na-adịbeghị anya, dị ka uwe, akpụkpọ ụkwụ, ngwa ejiji, Wdg
Ntụrụndụ: ihe ejiri ngwa nbipute 3D mee
Ka anyị ghara ichefu oge ezumike, nke bụ ihe a na-eji ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ 3D ụlọ. Ojiji ndị a nwere ike ịdị iche iche, site na ịmepụta nkwado ahaziri iche, ruo n'ịmepụta ihe ịchọ mma ma ọ bụ akụkụ ahụ mapụtara, na eserese nke mkpụrụedemede akụkọ ifo kachasị amasị gị, ikpe maka ọrụ DIY, iko ahaziri iche, wdg. Ya bụ, maka abaghị uru.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ha ejirila ihe nbipute 3D mepụta ngwaahịa ha. Ọ bụghị naanị n'ihi uru nke ụdị mmepụta ihe mgbakwunye a, kamakwa n'ihi na mgbe ụfọdụ, n'ihi mgbagwoju anya nke imewe, ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ya site na usoro omenala dị ka extrusion, iji ihe ọkpụkpụ, wdg. Na mgbakwunye, ndị a na-ebi akwụkwọ etolitela, na-enwe ike iji ihe dị iche iche, gụnyere akụkụ ígwè obibi akwụkwọ.
Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ime akụkụ maka ugbo ala, na ọbụna maka ụgbọ elu, ka ha na-ekwe ka a nweta akụkụ ụfọdụ nke dị oke ọkụ ma dị irè karị. Ndị buru ibu dị ka AirBus, Boeing, Ferrari, McLaren, Mercedes, wdg, enweelarị ha.
Ndị na-ebi akwụkwọ 3D na ọgwụ: dentistry, prosthetics, bioprinting
Akụkụ ọzọ dị mma iji ngwa nbipute 3D bụ ubi ahu ike. Enwere ike iji ha maka ọtụtụ ebumnuche:
Mepụta prostheses eze nke ọma, yana braket, wdg.
Bioprinting nke anụ ahụ dị ka akpụkpọ ahụ ma ọ bụ akụkụ ahụ maka ntụgharị n'ọdịnihu.
Ụdị prostheses ndị ọzọ maka ọkpụkpụ, moto ma ọ bụ nsogbu muscular.
Enwere ike iji ndị na-ebi akwụkwọ 3D mepụta ihe ịchọ mma na efere, ma ọ bụ bipụta sweets dị ka chọkọletị n'ụdị ụfọdụ, na ọbụna maka ọtụtụ nri ndị ọzọ dị iche iche. Ya mere, ndị ụlọ ọrụ nri ọ na-achọkwa iji uru nke igwe ndị a.
Ke adianade do, a ụzọ melite nri nutritionally, dị ka ibipụta fillet anụ nke sitere na protein ndị e megharịrị ma ọ bụ nke e si na ya wepụ ihe ụfọdụ na-emerụ ahụ nke nwere ike ịdị n'anụ ahụ. Enwekwara ụfọdụ ọrụ iji mepụta ngwaahịa maka ndị anaghị eri anụ ma ọ bụ ndị anaghị eri anụ na-eme ka ngwaahịa anụ ahụ dị adị, mana a na-emepụta ya site na protein akwụkwọ nri.
Ma, n'ezie, ndị na-ebi akwụkwọ 3D bụ ngwá ọrụ ga-ejupụta ebe agụmakwụkwọ, ebe ọ bụ na ha dị ezigbo enyi maka klaasị. Site na ha, ndị nkuzi nwere ike ịmepụta ụdị ka ụmụ akwụkwọ wee mụta n'ụzọ bara uru na nke nwere nghọta, ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ n'onwe ha nwere ike ịzụlite ikike ha maka ọgụgụ isi na ịmepụta ụdị ihe ọ bụla.
3D ngwa nbipute akụkụ mapụtara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Ntuziaka kacha mma maka ndị nbipute 3D
Schottky diode: ihe ọ bụ na ihe pụrụ iche banyere ya